Rosbọchị Ọchịchị Rosé: Mee Ememe na Chicago Rosé
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Rosbọchị Ọchịchị Rosé: Mee Ememe na Chicago Rosé
Akụkọ kacha ọhụrụ Andorra • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Mmanya & mmuo
Ihe ọverageụverageụ Latitude, ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe n'azụ ụdị mmanya mmanya mba dịka 90 + Cellars na Lila Wines, na-eweta oriri na Chicago n'oge ọkọchị a na Celebrate Chicago Rosé, mmanya na-amachi oke ị toụ mmanya oge niile.
Usọrọ Chicago Rosé e kere na Chicago hụrụ n'anya summers n'uche, na-amalite na pụtara ìhè labeelu ji nganga na-egosipụta na obodo na agba na iconic skyline. Mmanya a bụ ngwakọta ọdịnala ndịda nke French nke Grenache, Syrah, Cinsault na Mourvedre si Languedoc, France. Ọ bụ crisp, ume ọhụrụ, akọrọ na mkpụrụ osisi na aromas nke ọhụrụ strawberries na-acha uhie uhie cherị. Jikọta ya na nri Pizza miri emi, Chicago-style hotdogs na umengwụ ụbọchị na-abanye n'akụkụ ọdọ mmiri.
"Chicago nwere ọnọdụ pụrụ iche n'ime obi anyị," ka Kevin Mehra, CEO, Latitude Beverage kwuru. “Anyị nwetara nnabata nke etiti ọdịda anyanwụ mgbe anyị gbasaa azụmahịa anyị gafere New England ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri gara aga, na-eme ka Chicago bụrụ otu n’ime ahịa mbụ anyị. Dị nnọọ ka anyị kwa afọ Rosé na Mmiri nrughari gburugburu Lake Michigan, a wine agba n'oge okpomọkụ na Chicago mgbe obodo bụ n'ezie na oge ntoju. ”
Ọ bụghị naanị na ndị Chicagoans ga-enwe obi ụtọ na Chicago Rosé, ọ ga-emere ndị obodo ahụ ihe ọma. Otu dollar site na karama ọ bụla a na-ere ga-aga Greater Chicago Food Depository, onye otu na-eri nri America nke na-ekesa otu ihe oriri 159,000 gafee Cook County kwa ụbọchị. A na-atụ ahịa ire ere oge a ka ha wepụta ihe ruru $ 10,000 maka nri nri.
"Anyị nwere ekele dị ukwuu maka ndị mmekọ dịka 90 + Cellars ndị na-enyere anyị aka ime ka Chicago ka mma," ka Kate Maehr, Onye Isi na Onye Isi Nchịkwa nri na Greater Chicago kwuru. "Nkwado a sụgharịrị ịbụ nri ahụike na obodo obi ụtọ maka mmadụ niile."
Choo Agba Chicago Rosé na ụlọ ahịa Mariano, yana ọtụtụ ndị ọzọ na-ere mmanya mmanya na mpaghara Chicago. Mmanya ahụ nwere SRP nke $ 14.99 ma ọ dị ebe a n'oge maka National Rosé Day na Satọde, June 8.